श्रीया बलात्कार/हत्या गर्ने छिमेकी कुशुम पौडेल यिनै हुन्, के गर्थे पौडेल ? (घटना पूर्ण विवरण) – BIG FM 101.2 MHz
पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ९५ अर्ब लगानी
पोखरा विमानस्थलको काम दशैमा पनि जारी
नयाँबजारको त्यो भयानक दुर्घटना: कारमाथि बाइक चढ्नुको रहस्य खुलाए प्रत्यक्षदर्शीले
ब्रेकिङ न्युजः पोखरामा मध्यरात सडकमा बेवारिसे महिलामाथि बलात्कार, बाग्लुङका पन्त रंगेहात पक्राउ
कालीगण्डकी अक्सिजन ग्याँस ‘महाआजिजा’ को अन्तिम दिन कृष्णले जिते २० हजार
‘ढुक्क हुनुस्, टीकाको दिन पोखरामा डेढ सय बस चल्छन्’
पोखराबाट जापान जान ६३ जनाको लाइन, तर इन्स्टिच्युट नै नक्कली ! पोखरा र स्याङ्जाका २ जना पक्राउ
कास्की सार्दिखोलामा अशक्त महिलामाथि सामूहिक बलात्कार
साइकल गुडाएरै दसैंतिहारः पोखरेली साइकले ठिटो दिवसको ४० दिने नेपाल यात्रा
कालीगण्डकी अक्सिजन ग्याँस ‘महाआजिजा’ मा एकै दिन कपिल र अनुष्काले जिते ५–५ हजार
Home » स्थानीय » श्रीया बलात्कार/हत्या गर्ने छिमेकी कुशुम पौडेल यिनै हुन्, के गर्थे पौडेल ? (घटना पूर्ण विवरण)
श्रीया बलात्कार/हत्या गर्ने छिमेकी कुशुम पौडेल यिनै हुन्, के गर्थे पौडेल ? (घटना पूर्ण विवरण)
रञ्जन अधिकारी, पोखरा
पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रीया सुनारको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा उनकै छिमेकी पक्राउ परेका छन् । घटनाको २४ घण्टाभित्रै प्रहरीले मंगलबार राति २७ वर्षीय कुसुम पौडललाई पक्राउ गरेको हो ।
यस्तो छ घटना विवरणः
पाँच रुपैंया पाएपछि श्रीया पाँच मिनेटको दुरीको पसलमा समेत पुग्न पाइनन् । मेलामा हजुरआमाको भाग चिया मात्र खान पाएकी थिईन् । घरमा माइजुसँग खाजा पनि खाईनन् । हजुरआमाले दिएको ५ रुपैंया लिएर उनी नजिकैको पसलतिर दौडिन् । यो सोमबार ५ बजेपछिको समय हो ।
सुन काण्ड होस् या फेक इन्काउन्टर, कञ्चनपुर घटनामा प्रहरी जोडिएको घटना होस् । केही प्रहरीका कारण सिंगो संगठन बदनाम छ । उसै त लामाचौरको पुष्पा केसी प्रकरण सेलाएको छैन । कास्की प्रहरीले अन्त्यन्त गम्भिर भएर अनुसन्धान अघि बढायो । कास्की प्रमुख एसपी राना, प्रवक्ता डिएसपी रविन्द्रमान गुरुङ, वैदाम प्रमुख डिएसपी कार्की सहितको जिल्ला टीमले अन्ततः राति ११ बजेपछि अभियुक्त पक्रन सफल भयो । सुरुमा ६ जना नियन्त्रणमा लिएकोमा १ जना छाडेर रक्सी पिउने ५ जनाको समूहलाई केरकार गरियो । कुशुम पौडेलले घर जाँदा बाटोमा भेटिएकी श्रीयालाई आफूले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्विकार गरे ।
पोष्टमार्टम रिपोर्ट सहित अभियुक्त सार्वजनिक भने कास्की प्रहरीले बुधबार गर्दैछ ।
श्रीया प्रकरणमा प्रकाशित समाचारहरु:
प्रहरी घटनास्थलतर्फ जाँदै
अपडेटः पोखरा पुम्दीभुम्दीमा मृत फेला परेकी बालिकाको अनुहार क्षत विक्षत, झाडीमा अर्धनग्न शव
पुष्पा केसी, माया बोधी लामाबारे अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?
युट्युब च्यानल Big FM Pokhara लाई Subscribe गर्न नभुल्नुहोला ।
कार्तिक १, पोखरा। निर्माणाधिन पोखरा क्षत्रीय अन्तराष्ट्रीय बिमानस्थलको काम दशैको बेलामा पनि जारी रहेको छ । समयमै काम …